Frantsa : manakaiky ny 100 % amin’ny Harinkarena faobe ny trosam-panjakàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Janoary 2020 17:18 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, English, polski, русский, 繁體中文, 简体中文, Français
Trosam-panjakana sy fanehoana ireo loko pôlitikan'ireo governemanta (loharano : INSEE) nataon'i Tchone, CC BY-SA 3.0
Raha toa ka nananika ny 80 % an'ny Harinkarena Faobe ny trosam-panjakana 5 taona lasa izay, ankehitriny dia efa manakaiky ny 100 % amin'ny trosa isika. Mety handatsaka an'i Frantsa anaty toedraharaha marefo eo anivon'ny raharaham-barotra ny tombatombana toy izao.
30 300 €, io no vesatry ny vola isaky ny olompirenena iray. Ny Aogositra lasa teo, nihoatra ny fetra an'ohatra 2 000 lavitrisa € ny trosa frantsay. Tarehimarika nitombo teo amin'ny 90 lavitrisa teo raha oharina ny tamin'ny Janoary, izany hoe nitombo 4,7 %. Fanambarana natao herinandro taorian'ny tatitry ny Insee, nampahafantatra fitomboana mira aotra tao Frantsa, tanatin'ny telo volana faharoa nisesy.
Nahatratra ny fetra fara-tampony ve isika?
” Ny fitomboana mitsipoziposy sy ny mety hisian'ny fitotonganana ao amin'ny faritra mampiasa ny euro”, izany no fampitandreman'ny Fikambanana Misahana ny Fiarahamiasa sy ny Fampandrosoana Ara-toekarena (OCDE) ny Alatsinainy teo. Izao indray dia mety hahatratra 98 % an'ny Harinkarena Faobe ny trosam-panjakana frantsay amin'ny herintaona. Manazava io fivoarana io ny fitotonganana miakatra miaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fitomboana tsy ampy tosika,
Tsy afaka maminavina mialoha ny fanarenana ilay trosa isika, na amin'ity taona ity, na amin'ny 2015″, tokony hanohy hivoatra manaraka io fitomboany io hatrany izy.
hoy i Laurent Bigorgne, talen'ny Ivontoerana Montaigne.
Amin'ny taona ho avy izany. Handia tongotra anatin'ny vondron'ireo firenena manana trosa ahitàna isa telo i Paris. Hialoha an'i Italia, izay mpindram-bola goavana indrindra eo amin'ny sehatry ny varotra iraisam-pirenena i Frantsa, ao anatin'ny faritra mampiasa ny euro, izay handatsaka antsika anaty toedraharaha marefo dia marefo. Handavo ny toekarentsika ny fijanonan'ny fitomboana – ny fanjavonan'ny fidiran-ketra, ny fatiantoka mihalalina nóho ny noeritreretina – miaraka amin'izay ihany koa ny saika tsy fisian'ny fiakaran'ny vidim-piainana ; vesatra mafy loatra ho an'i Bercy. Vesatra izay tsy moramora ny manena azy.
Na dia misy aza ny laharampahamehana tsy azo dinganina, manokana vola maherin'ny 45 lavitrisa euros i Frantsa hanonerana fotsiny ny zanabola tamin'ny indrambolantsika, izany hoe ny vola miditra rehetra amin'ny hetra aloha, ohatra, dia natokana andoavana ireo zanabola ireo fotsiny ihany. Hampitsimbadihana io toedraharaha io, tsy maintsy misy fiverenanà fitomboana matanjaka ; fitsitsiana matetika anatin'ireo fandaniambolam-panjakana ; ary tontolo eoropeana mavitrika kokoa. Nefa, amin'ireo teboka telo ireo, tsy dia misy fivoarana loatra ao anatin'ny fotoana fohy. Tsiahivina fa vao avy nanena ny saran'ireo hetsika kasaina hatao ao amin'ny faritra mampiasa ny euro, indrindra ao Frantsa, ny OCDE. Amin'ny ambangovangony dia mbola hitombo ny trosan'i Frantsa, mety haherin'ny 70 lavitrisa euros amin'ny herintaona, hanakaiky ny 100 % amin'ny Harinkarena Faobe ihany izy io ny farany.
Mpampindrambola be fandeferana
Mahagaga anefa fa mindram-bola aminà taha ambany dia ambany eo amin'ny tantarany ny fanjakana frantsay ankehitriny, ary tsy mbola nahazo taha findramambola ambany toy izao mihitsy izy. Mbola manohy mampidi-trosa antsika araka izany i Frantsa, eny fa na dia aminà taha miiba aza, ary vola averina anaty fotoana fohy. Telo andro lasa izay, vao nampidi-trosa valo lavitrisa euros i Frantsa, taminà taha miiba, porofon'ny fahatokisana omen'ny sehatry ny varotra antsika.
70 % an'ireo mpandoha ny hetram-panjakana frantsay – banky, kitapombola fisotroan-dronono, orinasa fiantohana, volam-panjakana – no tsy mponina ao akory. Anatin'ireo vahiny mpandoha hetra ireo, maro anefa no monina ao anatin'ny faritra mampiasa ny euro. Araka izany, 52 % an'ireo hetran'i Alemaina sy Frantsa no voatana ao anatin'ny faritra mampiasa ny euro ary aloha amin'ny maribola euro. Sady tombony no fahalemena ho antsika ny fihazonan'ireo mpandray anjara vahiny ny trosantsika.
Porofon'ny fisarihantsika ny hafa, mira fahatokisana an'i Frantsa ireo naoty avo dia avo atolotr'ireo masoivoho lehibe mpanome naoty antsika ; lafy ratsiny, satria ny tahan-trosa avo hazonin'ireo tsy mponina dia midika fa marefo manoloana ny fianjeran'ny toedraharaha iraisam-pirenena isika – ohatra i Gresy nandritra ny krisin'ireo trosam-panjakana – izay mety hiteraka fipoahan'ny tahan'ny zanabola sy ny hasarotana bebe kokoa eo amin'ny findramambola eo amin'ny sehatry ny varotra.
Eny, miaina anatinà tontolom-bola mivoaka amin'ny mahazatra i Frantsa, ary mindrana aminà taha ambany dia ambany. Mety haharitra ve izany ? Mifanipaka amin'ny fiheverana rehetra izany ary toa mety ho fahagagana mihitsy aza.